Iflethi yanamhlanje kumbindi weNewcastle-Under-Lyme
Newcastle-Under-Lyme , England, United Kingdom
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguLynsey
Le flethi yanamhlanje imi kumbindi wedolophu yaseNewcastle-Under-Lyme. Igumbi lokulala elikhulu linohambo olukhulu kwiwodrophu kunye negumbi lokuhlambela elinendawo yokuhlambela eneshawa yamanzi emangalisayo, amagumbi okulala ama-3 amakhulu aphindwe kabini kunye nendawo yokuhlala enesisa enetafile yokutyela yezihlalo ezi-6. Ukukhanya kunye nomoya kuyo yonke le ndawo yindawo emangalisayo yokuhlala!
Ukuhamba imizuzu emi-2 ukusuka kumbindi weNewcastle kunye neekhilomitha ezi-2 ukusuka eHanley, iindawo zokupaka ezininzi ezibekwe esweni kwi-cctv. I-WiFi ngexabiso eliphantsi edolophini pls ungalindeli iHilton! X
Embindini weNewcastle, iikhilomitha ezi-2 ukusuka eHanley Stoke eTrent. Amagumbi okulala amabini ane-ensuite emangalisayo kwigumbi lokulala eliphambili, ikhitshi evulekileyo yesicwangciso kunye nendawo yokuhlala. Ukuziva ekhaya ukusuka ekhaya
4.53 ·Izimvo eziyi-213
4.53 out of 5 stars from 213 reviews
4.53 · Izimvo eziyi-213
Imi kumbindi wedolophu
Umbuki zindwendwe ngu- Lynsey
Thumela umbhalo okanye i-imeyile nangaliphi na ixesha ngexesha lokuhlala kwakho.